(प्रकाश १२:५; १९:११-१६) यसको अर्थ के हो येशूले फलामको डण्डाले शासन गर्नुहुनेछॽ - Love of God - Nepal
(प्रकाश १२:५; १९:११-१६) यसको अर्थ के हो येशूले फलामको डण्डाले शासन गर्नुहुनेछॽ
पोस्ट गरिएका जुलाई 27, 2021 द्वारा Kevin J. Mullins भित्र Character of God
347 प्राप्त हिट्सहरु
Original Article: https://lastmessageofmercy.com/article/view/what-does-it-mean-that-jesus-will-rule-with-a-rod-of-iron
“त्‍यस स्‍त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्‍डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्‍माई। त्‍यसको बालक परमेश्‍वरकहाँ उठाइएर उहाँको सिंहासनमा लगियो।” (प्रकास १२:५)
अझ यो देखाउन कि यो "मानिस बच्चा" वास्तवमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामी प्रकाश अध्याय १९ मा हेर्दछौं:
मैले स्‍वर्ग उघ्रेको देखें र त्‍यहाँ एउटा सेतो घोडा थियो। त्‍यसमाथि सवार हुनुहुने “विश्‍वासयोग्‍य” र “सत्‍य” कहलाइनुहुन्‍छ। धार्मिकतामा उहाँले इन्‍साफ र युद्ध गर्नुहुन्‍छ। उहाँका आँखा आगोका ज्‍वालाजस्‍ता थिए, र उहाँका शिरमा धेरै राजमुकुट थिए। उहाँमा एउटा नाउँ अङ्कित थियो, जो उहाँलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। उहाँले रगतमा चोबलिएको पोशाक पहिरनुभएको थियो, र उहाँको नाउँ “परमेश्‍वरको वचन” थियो। स्‍वर्गका सेनाहरू सेता र स्‍वच्‍छ मलमलका वस्‍त्र पहिरिई सेता घोडाहरूमा चड़ेर उहाँको पछिपछि लागे। जाति-जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्‍कन्‍छ, र उहाँले फलामको डन्‍डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका क्रोधको दाख-कुण्‍ड उहाँले कुल्‍चनुहुन्‍छ। उहाँका पोशाक र तिघ्रामा “राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु” अङ्कित छ। (प्रकास १९:११-१६)
प्रश्न यो खडा हुन्छ कि यो हो वा होइन यस "फलामको डन्डा" को अर्थ हो कि ख्रीष्ट कुनै किसिमको हिंस्रक शासक हुनुहुनेछ जसले राष्ट्रहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। जे होस्, हामी देख्छौं कि "धार्मिकतामा उसले न्याय र युद्ध गर्छ"।“र त्यसको मुखबाट एउटा तरवार धारिलो छ, जसले त्यो मार्फत जातिहरूलाई पराजित गर्नेछ”, "र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको क्रोध र क्रोधको दाखमद्यलाई त्यसले कुच्लदछ।" हामी यहाँ एक संक्षिप्त गहिरो विचार गरौं:
धार्मिकतामा उहाँ न्याय र युद्ध गर्नुहुन्छ।
येशू आफैले भन्नुभए पछि हामी यस भनाइलाई गहिरो तान्न आकर्षित भएका छौं। “तपाईं शरीरको आधारमा न्याय गर्नुहुन्छ; म कसैको न्याय गर्दिन। ” (यूहन्ना ८:१५) यहाँ यो फेरि क्रिश्चियन स्ट्यान्डर्ड बाइबलमा छ: “तपाईं मानवीय मापदण्ड अनुसार न्याय गर्नुहुन्छ। म कसैको न्याय गर्दिन। ”
त्यसोभए यो कसरी हुन सक्छ कि धर्मशास्त्रले भन्छ कि येशू न्याय गर्नुहुनेछ, तर उहाँ आफैले भन्नुभएको छ कि उहाँ कसैको न्याय गर्नुहुन्न। यसको ठीक पछि येशू भन्नुहुन्छ, "र यदि म न्याय गर्छु भने पनि मेरो न्याय सत्य छ: किनकि म एक्लो छैन, तर म र पिता जसले मलाई पठाउनुभयो। ” (यूहन्ना ८:१६)। येशूको न्याय सत्य हुनेछ किनकि उहाँ “धार्मिकतामा” न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसोभए "सत्य" न्याय के हुन्छ?
“सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, ‘साँचो न्‍याय गर, एकले अर्कालाई दया देखाओ र टिठ्याओ। विधवाहरू र टुहुरा-टुहुरी, विदेशी अथवा गरीबहरूमाथि अत्‍याचार नगर। आफ्‍नो हृदयमा एका-अर्काप्रति खराब नसोच’। (जकरिया ७:९, १०)
स्पष्ट रूपमा हामी देख्छौं कि सही फैसला कार्यान्वयन गर्न को लागी हो:
दया र कृपा देखाउनुहोस् सबै व्यक्ति आफ्नो भाइलाई।
विधवा, टुहुरा टुहुरी, अपरिचित र गरिबमाथि अत्याचार नगर।
तपाईं कोहि पनि आफ्नो मनमा भाईको बिरूद्ध खराब कल्पना गर्न नदेनुहोस्।
कृपया याद गर्नुहोस् कि न्याय = दया र न्याय = सत्य। यस लेखन शैलीलाई हेब्राइक समानन्तरता भनिन्छ। हामी यशैयाको पुस्तकमा के पाउँछौं ध्यान दिनुहोस्:
“तापनि तिमीहरूमाथि अनुग्रह गर्न परमप्रभु इच्‍छा गर्नुहुन्‍छ। तिमीहरूमाथि दया देखाउन उहाँ उठ्‌नुहुन्‍छ, किनकि परमप्रभु न्‍याय गर्नुहुने परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ। उहाँको प्रतीक्षा गर्ने सबै धन्यका हुन्‌” (यशैया ३०:१८)
के तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वर “अनुग्रही” हुनुहुन्छ र “तपाईंमाथि कृपा” गर्नुहुन्छ किनकि उहाँ “इन्साफका परमेश्वर हुनुहुन्छ”?
धर्मशास्त्रले बताउँछ कि यो शैतान हो जसले हामीलाई पापको दोष लगाईरहेछ र हामी मर्ने माग गर्दैछ। क्रूसमा जब उसले "परमेश्वरको पुत्रको हत्या गरे" यो "भाइहरूको दोष लगाउने" पर्दाफास भयो:
त्‍यस स्‍त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्‍डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्‍माई। त्‍यसको बालक परमेश्‍वरकहाँ उठाइएर उहाँको सिंहासनमा लगियो।अनि स्‍वर्गमा लड़ाइँ भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्‍यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्‍यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे, र यिनीहरूका निम्‍ति स्‍वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्‍यो ठूलो अजिङ्गर तल फालियो— त्‍यो प्राचीन सर्प, जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो। त्‍यो पृथ्‍वीमा फ्‍याँकियो र त्‍यसका दूतहरू त्‍यसका साथसाथै फ्‍याँकिए।तब मैले स्‍वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठूलो आवाज सुनें, “अब हाम्रा परमेश्‍वरको मुक्ति, शक्ति, राज्‍य र उहाँका ख्रीष्‍टको अधिकार आएको छ। किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने, जसले हाम्रा परमेश्‍वरको सामुन्‍ने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लगाउँछ, त्‍यो तल फ्‍याँकिएको छ। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्‍ना गवाहीको वचनको कारण त्‍यसलाई जितेका छन्, र तिनीहरूले मृत्‍युसम्‍मै पनि आफ्‍नो ज्‍यानको माया राखेनन्‌। यसकारण हे स्‍वर्गमा रहनेहरू, तिमीहरू रमाओ। तर पृथ्‍वी र समुद्रलाई धिक्‍कार छ! किनभने आफ्‍नो समय अल्‍प छ भनी थाहा पाएर दियाबलस ठूलो क्रोधसाथ तिमीहरूकहाँ तल आएको छ।”, (प्रकास १२:५, ७-१२)
जब जहिले पनि कुनै दया बिना नै खन्याईन्छ, यो शैतानको निर्दयी न्याय प्रणालीको अभिव्यक्ति हो कि उसले ईश्वरको चरित्रको बारेमा अन्त्य गर्न र कसैलाई पनि उहाँतर्फ फर्कन रोक्न खोजेको हो। यो गलत प्रणाली परमेश्वरलाई घृणा थियो।
“त्यसपछि मैले प्रधान पूजाहारी यहोशूलाई परमप्रभुको स्वर्गदूतको सामुन्ने उभिरहेको देखें र शैतान उसको दाहिने पट्टि उभिरहेको थियो। प्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, “शैतान, परमप्रभुले तिमीलाई हप्काउनु हुनेछ! यरूशलेमलाई चुन्नुहुने प्रभुले तपाईंलाई हप्काउनुहुन्छ! के यो मान्छे आगोबाट तानेको जलिरहेको दाउरा जस्ता छैन? ” यहोशू स्वर्गदूतको छेउमा उभिरहेको बेला यहोशूले मैला लुगा लगाएको थियो। ती स्वर्गदूतले चारै तिर उभिएका मानिसहरूलाई भने, “उसको मैला लुगाहरू हटाऊ।” तब उनले यहोशूलाई भने, “मैले तिम्रो अधर्म क्षमा दिएँ र तिमीलाई राम्रो लुगाहरू लगाई दिन्छु।” (जकरिया ३:१-४, नयाँ अंग्रेजी अनुवाद - नेट)।
मृत्युदण्ड पापीबाट आउँछ, परमेश्वरबाट होइन:
“किनभने पापको ज्याला मृत्यु हो। तर परमेश्वरले दिनुहुने वरदान येशू हाम्रा प्रभु येशू मार्फत अनन्त जीवन हो।” (रोमी ६:२३)
“तर हरेक मानिस आफ्‍नै खराब इच्‍छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्‍छाले गर्भधारण गरेपछि त्‍यसले पाप जन्‍माउँछ। अनि पाप पूरै बढ़ेपछि त्‍यसले मृत्‍यु ल्‍याउँछ।” (याकूब १:१४, १५)
परमेश्वरले पापीलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र मार्नु पर्दैन किनकि पापको बाटोले स्वाभाविक रूपमा मृत्युमा पुर्‍याउँछ:
“साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्‍याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्‍छ, र यसबाट भित्र पस्‍नेहरू धेरै हुन्‍छन्‌। किनभने जीवनमा पुर्‍याउने ढोका साँघुरो हुन्‍छ र बाटो कठिन हुन्‍छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्‍याउँछ, र त्‍यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्‍छन्‌।” (मत्ती ७:१३, १४)
उहाँको मुखबाट एउटा धारिलो तरवार निस्कियो। कि त्यो उसले जातिहरूलाई हिर्काउनुपर्छ।
के यो तरवार हुनको लागि अनौंठो ठाउँ छैन? किन यो ख्रीष्टको हातमा छैन? किनभने त्यसले मानिसहरूलाई मार्न योद्धा जस्तो झुण्डिरहेको छैन। तरवार उनको मुखमा छ किनकि यसले परमेश्वरको वचनको सत्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ:
“अनि उद्धारको हेलमेट र आत्माको तरवार लिनु, जो परमेश्वरको वचन हो।” (एफिसी ६:१७)
“किनकि परमेश्‍वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्‍छ, र कुनै पनि दुईधारे तरवारभन्‍दा बढ़ी धारिलो हुन्‍छ। यसले प्राण र आत्‍मालाई त्‍यसका जोर्नी-जोर्नी र हाड़को गुदीसम्‍मलाई भाग-भाग पारुञ्‍जेल वारपार छेड्‌ने र हृदयका विचार र इच्‍छा जाँच्‍न सक्‍ने हुन्‍छ।” (हिब्रू ४:१२)
येशूको मुखमा भएको तरवारले पापको पक्का प्रमाण दिन्छ। निन्दा गर्ने तरिकामा होईन तर मायालु अनुशासनमा। यसको अर्थ यो हो जब उनले भन्छन् कि उनले जातिहरुलाई "हिर्काउनु" थियो। परमेश्वरले हामीलाई पापको निम्ति दोषी ठहराउनुहुन्छ (हामीलाई प्रहार गर्नुहुन्छ) ताकि हामी उहाँतिर फर्कियौं, उहाँकै पाप क्षमा स्वीकार गर्नुस् र पापबाट शुद्ध हुनुहुनेछ। यसरी उहाँको मुखको तरवारले हामीलाई सान्त्वना र उत्थान पनि दिन्छ। यो हिंसाको लागि कहिले पनि प्रयोग हुँदैन; "किनभने", अगमवक्ता भन्छन्, "उनले (मसीह / ख्रीष्ट) ले कुनै हिंसा गरेनन्, न उनको मुखमा कुनै छल थियो।" (यशैया ५३:९) परमेश्वरले कसरी प्रहार गर्नुहुन्छ भनेर सावधानीपूर्वक नोट गर्नुहोस्:
“अनि पछि यस्तो भयो, कि दाऊदको मुटुले उनलाई प्रहार गर्यो, किनभने त्यसले शाऊलको खास्‍टोको छेउ काटिदियो। ” (१ शमुएल २४:५)
यहाँ फेरि अनुवाद गरिएको छ ISV मा:
"पछि, दाऊदको अन्तस्करणले उनलाई दु: ख दियो किनभने उसले शाऊलको पोशाकको कुना काटिदियो।"
येशू आफ्ना शत्रुहरूलाई हिर्काउनको लागि शाब्दिक तरवार चलाउने स्पष्ट रूपमा हुनुहुन्थ्यो।
येशूको साथमा हुनेहरूमध्‍ये एउटाले हात बढ़ाएर आफ्‍नो तरवार झिक्‍यो, र मुख्‍य पूजाहारीको दासलाई प्रहार गर्‍यो, र त्‍यसको कान छिनाइदियो। तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो तरवार म्‍यानमा हाल, किनभने तरवार लिने सबै तरवारैले नष्‍ट हुनेछन्‌। (मत्ती २६:५१,५२)
आफ्नो तरवार चलाउने व्यक्ति पत्रुस थिए (यूहन्ना १८:१०, ११)। येशूले पिटरको तरवार हुनु पर्छ भनेर "ठाउँ" फिर्ता यसको आवरणमा फिर्ता आयो, वा, आध्यात्मिक रूपमा बोल्दै छ, पत्रुसको मुखमा! लूकाको हिसाबमा हामी पढ्छौं:
तब उहाँको छेउछाउमा भएकाहरूले के हुने हो, सो देखेर उहाँलाई भने, “प्रभु, के हामी तरवार चलाऔं?” तिनीहरूमध्‍ये एक जनाले प्रधान पूजाहारीको नोकरलाई हान्‍यो, र त्‍यसको दाहिने कान च्‍वाट्टै काटिदियो। तर येशूले भन्‍नुभयो, “भयो, अब यसो नगर।” अनि त्‍यस मान्‍छेको कान छोएर उहाँले त्‍यसलाई निको पारिदिनुभयो। (लुका २२:४९-५१ ISV)
यो सत्य घोषणा गर्नु र बाच्नु नै ख्रीष्टले “युद्ध” गर्नुहुन्छ। ग्रीक शब्द "युद्ध" को रूपमा अनुवाद गरिएको यहाँ πολεμέω (polemeó) हो जुन शब्द (पोलेमोस) बाट आएको हो जुन "पोलिमिक" वा "राजनीति" को लागि आएको हो।
“पोलेमिकल संज्ञा पोलेमिकको विशेषण रूप हो जुन आफै ग्रीक शब्द पोलेमोसबाट आएको हो, जसको अर्थ हो 'युद्ध'। एक विवाद वा तर्कलाई वर्णन गर्न पोलिमिक प्रयोग गर्नुहोस् जुन एक ठूलो द्वन्द्वको रूपमा अन्त्य हुन सक्छ किनभने पोलिमिकलले एक प्रमुख असहमतिलाई जनाउँछ। यो शब्द प्रायः बोली र लेखनको लागि प्रयोग गरिन्छ - एक पोलमिकल छलफल वा पोल्मिकल निबन्ध - यसले प्राय: शव्दहरूको युद्ध सुरू गर्दछ। ” (Vocabulary.com Dictionary)
"जब पोलेमिक फ्रान्सेली पोलेमीकबाट अग्रेजीमा १७ औं शताब्दीमा बोलेको थियो, यसले कसैको विचारहरूमा एक प्रकारको शत्रुतापूर्ण हमलालाई दर्साउँदछ (जस्तो कि यो अझै गर्न सकिन्छ)। शब्दले ग्रीक पोलेमिकोमा फेर्छ, जसको अर्थ हो "युद्ध" वा 'शत्रुतापूर्ण' र परिणामस्वरूप ग्रीक संज्ञा पोलेमोसबाट आउँदछ, जसको अर्थ हो 'युद्ध।' " (Merriam Webster.com)
परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ युद्धको बारेमा होइन किनकि हामी यो जान्दछौं, तर शान्तिको बारेमा छ।
“अनि उसले जातिहरूका बीचमा न्याय गर्नेछ, र हप्काउनेछ (मायालुपूर्वक दोषी ठहराउने र सही) धेरै व्यक्तिहरू (उनको तरवार / सत्यको साथ): र तिनीहरूले आफ्ना तरवार पिटेर हलोको फाली बनाउनु पर्छ। र भालाहरू छाँट्ने हुकमा: एउटा जातिले अर्को जातिको विरूद्धमा तरवार चलाउने छैन्। न तिनीहरूले फेरि कहिल्यै पनि युद्धको तालिम लिने छन्।” (यशैया २:४)
अनि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका क्रोधको दाख-कुण्‍ड उहाँले कुल्‍चनुहुन्‍छ:
अंगुरहरू रस अभिव्यक्त गर्न कुल्चिएका छन्। त्यसोभए हराएकाहरू पूर्ण रूपमा उजागर हुनेछन् जब उनीहरूको अपराध र ईश्वरको अनन्त कृपालाई अस्वीकार गर्ने तरवार (सत्य) ले राष्ट्रहरूलाई हिर्काउनेछ (सजाय) दिनेछ। तिनीहरूको जबरजस्ती आत्म-निन्दाको कारण। तिनीहरूको अपराध र स्वार्थीता हटाइनेछ र त्यहाँ “रुवाबासी र दाह्रा किटाइ हुनेछ” (लूका १३:२८) परमेश्वरको प्रेम तिनीहरूको आत्मालाई सताउनेछ, अनन्त शारीरिक यातनामा होइन, तर तीब्र मानसिक पीडामा उनीहरूले आफू आफैले फ्याँकिएको महसुस गरे इसाई लेखक ईजे. लाई याद गर्नुहोस् वैगनरले न्यायको बारेमा लेख्छन्:
"परमेश्वरको इच्छा हाम्रो पवित्रीकरण हो। १ थिस्सलोनी ४:३। सबै मानिसहरु मुक्ति पाएको र सत्यको ज्ञानमा आऊन् भन्ने उहाँ चाहानुहुन्छ। १ तिमोथी २:४। र उहाँ ‘सबै थोकको काम उहाँको इच्छाको सल्लाह अनुसार गर्नुहुन्छ।’ एफिसी १:११। सबै मानिसहरूलाई उद्धारको लागि’ ‘परमेश्वरको अनुग्रह देखापरेको छ, तीतस २:११, R.V. सबै मानिसहरुका निम्ति परमेश्वरले बचाउनु भएको छ र उसलाई प्रदान गर्नु भएको छ। तर बहुमतले यसलाई अस्विकार गरेर फ्याँक्छ। न्यायले सबै मानिसलाई पूर्ण मुक्ति दिने कुरालाई प्रकट गर्नेछ र हराएकाहरूले जानाजानी आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार फ्याँकिदिए ... धन्यको आशाका लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद! आशिष सबै मानिसमाथि आएको छ ... परमेश्वर, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका परमेश्‍वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्‍वर्गीय स्‍थानहरूमा हरेक आत्‍मिक आशिषले ख्रिष्‍टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। एफिसी १:३। उपहार राख्नु हाम्रो हो। यदि कसैसँग यो आशीर्वाद छैन भने, यो किनभने उसले गिफ्टलाई चिन्न सकेन, वा जानाजानी यसलाई फ्याँकिएको छ। "(ई. जे. वागोनर, ग्लाड टाइडिंग, पृष्ठ १३, १४, ६६)
अविश्वासीलाई अनन्त जीवनको अयोग्यको रूपमा आफूलाई इन्साफ गर्न दिनु परमेश्वरको क्रोध हो। (प्रेरित १४:४६; रोमी १:१८ २४, २६, २८)। उहाँको न्यायमा उहाँ आफैले तिनीहरूको फैसला स्वीकार्नुहुनेछ।
उसले फलामको डण्डाले उनीहरूमाथि शासन गर्नेछ।
येशूले जातिहरूलाई फलामको डण्डाले शासन गर्नुको तानाशाहीसित केही सम्बन्ध छैन। उहाँको अधिकारको डण्डा उहाँको धार्मिक न्याय, सत्य र दयाको बारेमा छ। तर यो खण्डको बारेमा के छ:
बालकलाई ताड़ना दिन नरोक्‌। तैंले त्‍यसलाई बेत लगाएर सजाय दिइस्‌ भने त्‍यो मरिजानेछैन। बेत लगाएर त्‍यसलाई सजाय दे, र त्‍यसको प्राण मृत्‍युदेखि बचा। (हितोपदेश २३: १३,१४)
यहाँ किंगजेम्स संस्करणमा "बीट" भनेर अनुवाद गरिएको शब्द हिब्रू शब्द हो נָכָה (नाका) जुन हामीले १ शमूएल २४:५ मा "चोट पारेको" शब्दमा देखेका ठ्याक्कै उही शब्द हो जहाँ "दाऊदको हृदयले उनलाई प्रहार गर्यो" जसको अर्थ "डेभिडको अन्तस्करणले उनलाई दु: ख दियो।"
डण्डाको साथ "कुट्नु" वा "पिट्नु" भनेको मायालु अनुशासनको बारेमा हो।
“अनुशासनको डण्डा छोड्नेहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई घृणा गर्छन्। जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई माया गर्दछन् उनीहरूलाई अनुशासन दिन पर्याप्त हेरचाह गर्दछन्। ” (हितोपदेश १३:२४, नयाँ लिभिङ्ग अनुवाद - NLT)
“जति धेरै म कदर गर्छु, म दोषी छु र अनुशासन दिन्छु; त्यसोभए जोसिलो हुनुहोस् र धर्म परिवर्तन गर्नुहोस्।” (प्रकाश ३:१९, लिटेरल स्ट्याण्डर्ड ट्रान्सलेसन - LST)
परमेश्वरको अनुशासनको तरिका हिंसा वा कठोर शब्दहरूको साथ कहिले हुँदैन; किनकि उहाँ "अझै सानो आवाज" मा बोल्नुहुन्छ (१ राजा १९ :११, १२), तर कहिलेकाँही "चर्को स्वरमा" बोल्छ जब कुनै ध्यान दिने आमाबुबाले उनीहरूको बच्चालाई व्यस्त सडकमा दौडिरहेको देख्दा हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्दछ। (प्रकाश १४:६,७)
"नरम जवाफले रीसलाई बगाउँछ, तर कठोर बोलीले रीस उठाउँछ।" (हितोपदेश १५:१, नयाँ किंग जेम्स संस्करण - NKJV)
“बुबाहरू हो, आफ्ना बच्चाहरूलाई उग्र वा रीस उठाउने वा रीस उठाउने काम नगर्नुहोस् [केही मागहरू जुन हल्का वा अव्यावहारिक वा अपमानजनक छन्; न त पक्षपात वा उदासीनता द्वारा; तिनीहरूप्रति करुणाकोसाथ व्यवहार गर्नुहोस्] ताकि उनीहरूले आफ्नो हृदय गुमाउनेछैन र निराश वा निर्जीव हुनेछैन [तिनीहरूको आत्मा भत्किएको]।” (कलस्सी ३:२१, एम्प्लीफाईड बाइबल)
परमप्रभु विगत समयमा हामीकहाँ यसो भन्‍दै देखा पर्नुभयो: “सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु। मैले तँलाई दया गरी खिँचेको छु। (यर्मिया ३१:३, NKJV)
ख्रीष्टको डण्डा हिंसा, धम्की वा दुरुपयोगको लागि कहिले पनि प्रयोग हुँदैन।“चाखेर हेर, कि परमप्रभु कस्तो भलो हुनुहुन्छ। त्यो मानिस धन्यको हो, जसले उहाँमाथि भरोसा राख्छ। " (भजन: ३४:८)
परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्‍छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्‍छ, र मलाई शान्‍त पानीको छेउमा डोर्‍याउनुहुन्‍छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्‍छ। उहाँले आफ्‍नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्‍याउनुहुन्‍छ। मृत्‍युको अन्‍धकारमय घाटी भएर जानुपरे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउनेछैनँ, किनकि तपाईं मेरो साथमा हुनुहुन्‍छ। तपाईंको लट्ठी र तपाईंको लहुरोले मलाई सान्‍त्‍वना दिन्‍छन्‌।
मेरा शत्रुहरूका सामुन्‍ने तपाईंले मेरो निम्‍ति भोज तयार पार्नुहुन्‍छ। तपाईंले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्‍छ, मेरो कचौरो भरिएर पोखिन्‍छ। निश्‍चय नै तपाईंको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि मपछि लाग्‍नेछ, र परमप्रभुको घरमा म सदासर्वदै वास गर्नेछु। (भजनसंग्रह २३)
१ शब्द "यातना" को बाइबलीय बुझाइ को लागी “द लेक अफ फायर र दोस्रो मृत्यु” भन्ने पुस्तक हेर्नुहोस्।